Fangatahana ampanaovin’ny Papa ho an’ny volana Febroary » Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA
« Jery Todiky ny taona 2018
Soridalana iombonan’ny AFAFI-FET »
« Mba ho voaray am-pitiavana anie ireo iharan’ny fanararaotana amin’ny maha olona, ireo terena hivarotena sy iharan’ny herisetra ».
Maro ankehitriny ireo karazana tranga fanararaotana sy herisetra manosihosy sy manapotika ny maha olona ny olona miseho eto amin’izao tontolo izao ; toy ny herisetra ara-tsaina, ny herisetra sy ny fanararaotana ara-nofo ; fa misy koa ny herisetra ara-bola sy ny herisetra ara-batana. Tsy amin’ny tany an-dalam-pandrosoana na amin’ny firenena mahantra toa an’i Madagasikara ihany tsy akory no ahitana toe-javatra toy izany, fa saika maneran-tany mihitsy. Mazàna dia ny ankizy sy ny vehivavy no mizaka sy iharan’ireny karazana fanararaotana sy herisetra ireny. Fa tsy vitsy koa ny lehilahy no iharan’ny herisetra ara-tsaina sy ara-batana any amin’ny toeram-piasana sy ny fiaraha-monina any, indrindra ireo lasibatry ny asan-dahalo sy jiolahy, na an-tanan-dehibe na ambanivohitra.
Mihamahazo vahana, ohatra, ny fanararaotana mamoafady sy ny fanondranana olona mivantana na an-tsokosoko avy aty amin’ny firenena mahantra. Manerana izao tontolo izao dia maro ireo tovovavy no iharan’ny herisetra, ka ny fanararaotana ara-nofo no manjaka indrindra amin’izany.
Amin’ny maha Raiamandreny sady mpampianatra no mpanabe ny Eglizy, dia adidy sy andraikitra lehibe no iantsorohany sy atrehiny amin’ny fanentanana sy fanabeazana ny mpino ao aminy sy ny olom-pirenena tsy ankanavaka, mba samy ho tompon’andraikitra ny rehetra manoloana ny fanararaotana mahazo ny sokajin’olona iharan’izany, na ankizy na vehivavy sy lehilahy.
Fantatra fa eran’izao tontolo izao, dia misy ireo fiarahamonim-pirenena miaraka sy mifanohana miady amin’ity fanararaotana sy herisetra ity, ary tafahaona izy ireo tamin’ny taona 2017 teo ambany fitarihan’ny filan-kevitry ny Fiangonana maneran-tany, dia nifanaraka fa hiombona amin’ity ady iraisana ity. Anisan’ny fiarovana sy fanampiana ireny olona ireny ny fandraisana azy am-pitiavana ao anatin’ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina ary ny Fiangonana.
Ny Eglizy katolika, amin’ny alalan’ny Papa Ray Masina, dia manentana ny vita Batemy rehetra sy ireo tsara sitrapo, mba hanampy sy hihaino ary handray an-tanana ireo olona iharan’ny herisetra. Manentana hatrany ny Papa François amin’ny fampianarana sy ny hafatra ataony ombieny ombieny, amin’ny hanamafisana ny fandraisana an-tanana ireo olona iharan’ny herisetra. Ny fitondrana am-bavaka sy fanankinana izany amin’Andriamanitra amin’ny Fanolorana ny andro mandritra ity volana ity dia fandraisana anjara tsotra nefa ambony sy lavorary ary azon’ny rehetra atao.